Ndoita Sei Kana Ndichifoira Kuchikoro? | Vari Kuyaruka
SARUDZA MUTAURO Abkhaz Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kinyarwanda Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Moore Mutauro Wemasaini wokuAmerica Myanmar Nepali Norwegian Ossetian Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quiche Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tiv Tsonga Turkish Turkmen Twi Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Iva nemafungiro akanaka! Usambofa wakazvinyengera uchizviudza kuti zvechikoro hazvisi mauri. Pfungwa dzako padzinotanga kufunga izvozvo, dzibvise ufunge zvinhu zvakanaka. Somuenzaniso, vanhu pavaishora muapostora Pauro vachimuti haagoni kutaura pane vanhu, iye akapindura achiti: “ Kunyange zvazvo ndingasava nyanzvi pakutaura, chokwadi handina kudaro pazivo. ” (2 VaKorinde 10:10; 11:6) Pauro aiziva zvaakanga asingagoni. Asiwo aiziva zvaaigona. Ko iwe? Ndezvipi zvaunogona? Kana usingazivi, bvunza mumwe munhu mukuru waunovimba naye. Munhu akadaro achakubatsira kuti uone zvaunogona wobva wanyatsozviita nomazvo.
Farira kuverenga. Kana uchida kubudirira kuchikoro unotofanira kudzidza, hapana imwe nzira. Ichokwadi kuti kungonzwa shoko rokuti kuverenga mudumbu munotanga kurira. Asi kuverenga kwakanaka. Kana ukati wedzerei kushanda nesimba uchaona kuti kuverenga kunonakidza. Kuti ufarire kuverenga unofanira kuronga nguva yako. Yeuka kuti kuverenga ndiko kunofanira kuenda pokutanga. Bhaibheri rinoti pane “ nguva yokuseka ” uye “ nguva yokusvetuka-svetuka. ” (Muparidzi 3:1, 4; 11:9) Kungofanana nevamwe vezera rako unodawo nguva yokumbofara. Asi Muparidzi 11:4 inonyevera kuti: “ Munhu anotarira mhepo haazodyari mbeu; uye uya anotarira makore haazokohwi. ” Zvii zviri kurehwa? Usaverengera kuita zvinhu. Ukaverengera unotadza kuita basa rinokosha. Basa rechikoro pakutanga, kutamba kwozotevera. Usatya hako unogona kuwana nguva yokuita zvose!
Kusimudza masimbi kunosimbisa muviri. Kufarira kuverenga kunoita kuti uwedzere kubudirira kuchikoro.